Visa eGrisi. Thinta ukuze iphupho.
Greece - kwelinye lamazwe ezimangalisayo kunazo ezwekazini laseYurophu, it is eseduze ngaseningizimu iNhlonhlo Yamazwe AseBalkan. osogwini olusenyakatho-Greek bahlanza by ezilwandle eziningana: i-Ionian, Aegean futhi iMedithera. inkathi Cold lina, okuyinto Uthatha Septhemba kuya kuMashi, kancane kancane sithathelwe indawo isizini efudumele futhi omile, okuyinto Uthatha April kuya maphakathi no-September. Inhloko-dolobha yaseGreece, e-Athens - kuyinto idolobha lesibili ngobukhulu kuleli zwe, okungukuthi i-ifa layo ocebile zomlando ke edonsela njalo ngonyaka isibalo esikhulu sezithunjwa izivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba. Ngemva Olympics, 2004 i-Athene yaba ethandwa nakakhulu izivakashi zakwamanye amazwe, inhloko-dolobha ngesiGreki, kulapho ukuze visa eGreece ngempela kufinyeleleke izivakashi Russian ekwenzeni izimo likubeka ngokucacile.
EGreece phakathi kwamazwe yesivumelwano Schengen, ngaphansi kwesivumelwano umnikazi Schengen visa unelungelo lokuthathwa njengomsulwa khona kunoma yimaphi amazwe nambili EU. Visa eGreece atholakale izakhamuzi isiRashiya, ukugcwalisa izimo ezimbili: khona lemali edingekayo yendawo kanye ukuthengwa umshuwalense wezempilo. Ukuze wenze lokhu, kudingeka uhlinzeke embasi isitatimende akhawunti yekhadi lesikweletu noma ubufakazi ukuthengwa lwemali. Kumele kukhunjulwe ukuthi ikhishwe visa at enxuseni eGreece alikwazi ukunwetshwa ensimini kuleli ngokwayo. Ukuthola emhlabeni eGreece abaseRussia ulinganiselwe, entry Nokho, kungenzeka ukuthi abanye abantu waphika zingena ngokukhululekile kuleli zwe. Esikhathini esizayo esiseduze kuba ukuqedwa nalehleliwe visa eGreece izakhamuzi isiRashiya, kodwa namuhla lolu daba namanje ngaphansi ukuthuthukiswa. UMthetho omusha "Ngo Ukuvikelwa kwedatha yomuntu siqu" kudinga bonke abafakizicelo visa ukugcwalisa isivumelwano mayelana nokuvikelwa idatha yomuntu siqu ngamunye izivakashi ezweni.
Greece kuyinto kamongameli republic ePhalamende, amandla okushaya imithetho athweswe kwePhalamende unicameral kanye nomongameli. Visa eGreece akusho ukwethula ibuphi ubunzima isihambi lapho ukuthola ngokusebenzisa inkampani yokulungisela abahambayo, ikakhulu ngesikhathi samanje lena akuyona inkinga. Abaningi tour opharetha ukunikela eliphezulu futhi izinkambo ezithakazelisayo eGreece, kokubili ngokoMthetho nokungcebeleka, kanye nenjongo yobuchopho. The izinto ezibaluleke kakhulu yilezi enhliziyweni Greece - Athens, lena Byzantine Museum, kanye Museum ye-Acropolis engasenyakatho futhi kuwo eNational Archaeological Museum nezinye ekhosombeni eziningi yobuciko. By izinto Greece uyithempeli likaMoya Acropolis futhi National kwebuciko kanye Archaeological Museum yase-Olympia ingenye omdala emhlabeni lasendulo, kuba izivakashi iqoqo ezithakazelisayo eziningi ezenziwe ngobungcweti yamaGreki asendulo.
Isikhathi ukuthola i-visa eGreece kuyinto izinsuku ezintathu kuya kweziyisikhombisa, kuye ngokuthi umzila kanye nokuvakasha, phakathi kwesikhathi lapho izivakashi isikhathi lizwe bazovakashela enxuseni isiGreki isidingo aphase interview siqu. Uhlu amadokhumenti adingekayo ukuthola ama-visa ngesiGreki ingatholakala ngesikhathi inkampani yokulungisela abahambayo. Njengomthetho, bonke abaqhubi uhambo ukunikeza amakhasimende abo nge akusize uthole i-visa futhi iqoqe amaphepha adingekayo, ngakho-ke kwenziwa esikhathini kwetfulwe esifushane. ukugcwaliswa engalungile kwemibhalo ukuthola i-visa kungaba ngokuphawulekayo izinkinga inqubo wayithola futhi ukubeka uthathe uhambo oluya ezweni esongelwa, yingakho kungcono ukusebenza nawo nezifundiswa ongakusiza ngokunembile nangokulinganisela isikhathi ukuqoqa futhi ugcwalise izitatimende edingekayo kanye nokwaziswa.
Uya eholidini ezweni lamaGreki, ungakhohlwa. Lokho ukucutshungulwa ngesikhathi esifanele kwemibhalo kuzosiza ugcine isikhathi esiningi nokuzikhandla, futhi wenze lonke izwe ezithakazelisayo futhi ongasoze.
I zokungcebeleka best of Kislovodsk. Isilinganiselwa, incazelo, ukubuyekezwa
I zokudlela ethandwa kakhulu, Saratov: "UMpheme", "Madoda Fortune" nezinye
Nethempeli baalshamin Wafa uBhela: wabhubhisa Amatshwayo Palmyra
Public zokugeza (Voronezh): ikheli, izithombe kanye nokubuyekeza
Ukuguqulwa uPetru 1st
Pechenegs - lena ... Ukunqotshwa kwe-Pechenegs
Okufanele ukwenze ku sokubeletha? Ungqimba ongakhetha
Zingaki izinsuku go nyangazonke ezinkathini ezihlukahlukene zokuphila?
Ukulungiselela iZirtek: imiyalelo yokusetshenziswa